Lova sy ny cohesion, fahombiazana sy fahombiazana amin'ny ho avy
ny mpitantana ny May-Wed-2018
Tamin'ny faha-12 sy faha-14 May, ny lehibe rehetra mpikambana ao amin'ny sakafo mahagaga natao fiara soa aman-tsara ny tetika isan-taona 2019 sy ny fitantanana seminera. Ny foto-kevitry ny seminera io dia "Lova sy ny cohesion, fahombiazana sy fahombiazana amin'ny ho avy", ary tapa-kevitra ny tetikady fampandrosoana ny orinasa tamin'ny 2019 sy ny t ...
Sakafo mitondra firenena miara-11, indrindra ihany koa ny fikambanana sakafo fahefana hanipy ny sampana oliva, manao zavatra!
Tamin'ny 8 Desambra, ny Sina (Shaxian) Snack Tourism sy Fetiben'ny Kolontsaina hampidirina ao amin'ny faha-20 taonany. Misy tanteraka ny firenena 11 manerana ny firenena, anisan'izany Frantsa, Brezila, India, ary ny hafa firenena 11, izay nitondra sakafo dia miara-Sha County, ary 100 mahery iraisam-pirenena sy ny loca ...
Magic Food fiara avy any ivelany Market R & D departemantan'i naorina sy naorina.
Noho ny fiakaran'ny finday fisakafoana fiara orinasa sy ny endriky ny vokatra, ny finday fiara fisakafoana kolontsaina nanjary malaza hatrany ampitan-dranomasina. Ao amin'ny orinasa vaovao amin'ny finday fisakafoana fiara, ny majika sakafo fiara efa ela no fantatry ny vahoaka Sinoa. Io no orinasa voalohany izay niditra tao amin'ny ...
Going lalina fivarotana fiara ho any an-tsaha, ny orinasa dia notakarina avy amin'ny Dubai fisakafoana fiara ary ankehitriny efa sarobidy ny orinasa maherin'ny 100 tapitrisa!
Magic sakafo nandray fiara-paka ao amin'ny famolavolana sy fanamboarana ny fiara fisakafoana fiara, dia nahazo fitaomam-panahy avy endrika fanavaozana Dubai, ny malaza indrindra eran-kolontsaina fiara fisakafoana tanàna. Ny fiara natao dia mora ampiasaina sy tsara tarehy. Ny kintana vokatra izay ny orinasa namorona dia tena deraina ny custo ...
Dubai Mobile Fisakafoanana hariva mahita Guangzhou Festival International Sakafo
Indray mandeha fitsidihana Guangzhou Festival International Sakafo manerana izao tontolo izao izy io tonga tamin'ny farany! ! ! Amin'ny maha-ambony sakafo Nahoana no malahelo io nivonto Gourmet sakafo any an-danitra? More tsy nampoizina dia Voalaza fa sakafo kamiao teny an-dalamben'i Dubai (Food Truck) Na dia niseho tao Guangzhou Internation ...